Tea leaves = fertiliser – bokashimyanmar.com
About Bokashi Myanmar
Why is bokashi so important?
Start with bokashi!
How to do bokashi
Information for beginners!
How to make kitchen bokashi (bucket with tap)
How to make kitchen bokashi (bucket with no tap)
How to add bokashi toaplanting container
How to add bokashi toagarden bed
How to use bokashi inagarden compost
How to buildabokashi compost stack
How to make CEM
Why it is urgent to restore soil carbon
Tea leaves = fertiliser
by Bokashi Myanmar May 25, 2018 June 15, 2018 Leaveacomment
Here’s an inspiring story.
Onaspare corner ofacommunity wasteland (=dump, basically) in Mandalay this guy is drying used tea leaves. He collects them from local tea shops onaregular basis and brings them here to dry.
Then he packs them all up in rice sacks and sells them as fertilser.
It’samicro business but it’sagenius idea, so much more of this would be needed.
ရပ်ကွက်ကလူတွေ အမှိုက်ပစ်ကြတဲ့နေရာရဲ့ ထောင့်တထောင့်မှာ ဒီလူကြီးက သုံးပြီးသားအချိုခြောက်တွေကို နေလှန်းနေရဲ့။
ရပ်ကွက်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လေးတွေကနေ ပုံမှန်သွားသွားယူလာပြီး ဒီမှာနေလာလှန်းတယ်။
အခြောက်လှမ်းပြီးသားတွေကို ဆာလာအိတ်ထဲထည့်ပြီး၊ ခြင်ဆေးခွေလုပ်တဲ့နေရာမှာရယ်၊ မြေဩဇာအဖြစ်ရယ် ပြန်ရောင်းသတဲ့။
ဒီစီးပွားရေးလေးက တကယ့်သေးသေးလေးပါ။ သို့သော် တကယ့်အကြံကောင်းလေး။ ဒီလို အိုင်ဒီယာ နဲ့ လုပ်နည်းတွေ ပိုပိုများလာဖို့ လိုတယ်။
#bokashimyanmar #foodwaste #sustainablemyanmar #makessomuchsense
food waste, Thin Ga Zarbokashi myanmar, food waste, sustainable myanmar
Written by Bokashi Myanmar
Organic waste is not trash! #soilrevolution
Previous Entry Kindness not plastic.
Next Entry Bokashi Myanmar — the film!
Love and care in our bokashi world. These little seedlings are doing well in our safe hands... /Bokashi Myanmar gardeners ဘိုကာရှီကမ္ဘာထဲက မေတ္တာတရားနဲ့ဂရုစိုက်မှု။ ကိုယ်တွေရဲ့လုံခြုံမှုလက်ကလေးတွေထဲ ဟောဒီပျိုးပင်ပေါက်လေးတွေ သန်စွမ်းနေကြရဲ့။ #bokashimyanmar #yangonsbestcompost #soilrevolution #foodwasteisnottrash
English text follows!!! ဒီနေ့တော့ ခြံထဲမှာ မြေငွေ့ထိန်းဖို့ အုန်းဆံကြိတ်နေတယ်။ ခြံထဲကစိုက်ခင်းဘောင်တွေ၊ အိုးထဲကအပင်တွေစတာတွေအတွက် အပေါ်ကအကာအနေနဲ့သုံးဖို့သိပ်ကောင်းတဲ့အရာလေးပေါ့။ အားနဲ့မာန်နဲ့ကျလာတဲ့မိုးစက်တွေကိုလည်းကာပေးနိုင်တယ်။အပင်လေးတွေအတွက်မြေဆီကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အမိုက်အဖြစ်အပစ်မခံရအောင်သွားကောက်ယူထားတဲ့ အုန်းဆံခွံတွေကို စက်ကလေးနဲ့ကြိတ်ချပြီး EM အကျိုးပြုအနုဇီဝ ဖျော်ရည်နဲ့စိမ်ထားတာပါ။အပင်တွေအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ပေါ့။ စမ်းသုံးကြည့်ချင်ပါသလား။ စနေနေ့တိုင်း တောင်သူလယ်သမားဈေးမှာလည်းရနိုင်သလို ကိုယ်တွေရဲ့ဖေ့ဘုတ်ကနေတဆင့်လဲမှာယူနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ We’re making ”Monsoon Mulch” today here at Bokashi Myanmar! It’s becoming quite popular asatopping for all kinds of potplants and garden beds - stops the rain doing so much damage and improves the soil for your plants. We make it from coconut husk that we rescue from landfill and shred - and its soaked in EM (Effective Microorgamisms) to give your plantsaboost. Want to try? Available at the Farmers Market on Saturdays or through our facebook shop (we deliver). /Bokashi Myanmar coconut shredders #bokashimyanmar #monsoonmulch #bestprotectionforyourplants
English text follows!!! တီဗီသရုပ်ဆောင် အေးအေး😂 မသိရင်ပဲ တစ်သက်လုံး ဘိုကာရှီလုပ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့ ကင်မရာကြည့်ပြီးပြောနေလေရဲ့။ ကိုယ်တွေလုပ်ဆောင်နေတာကို ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူမျှဝေခွင့်ရလို့ အရမ်းပဲ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ Aye Aye is our new TV star! Talking to the cameras like she’s been doing it all her life. We’re so happy to be sharing what we’re doing with the world! /Bokashi Myanmar TV team #bokashimyanmar #soilrevolution #foodwasteisnottrash
အောက်မှာ မြန်မာလိုပါ ပါသေးတယ်နော။ Look how nice it’s looking in our bokashi yard! Back in February it was an unloved jungle, we cleared it intoadesert and now we are makingaproductive green space in the heart of North Dagon. We’re making 20 tons of compost from food waste here - per month. AndaTV team is on its way to film what we do. The Recyglo team are joining us - the theme is recycling in Yangon. Fingers crossed it goes well! /Bokashi Myanmar team ဘိုကာရှီခြံထဲ ဘယ်လောက်တောင်ကြည့်ကောင်းနေလဲရှိုးလိုက်အုံး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလောက်တုန်းကဆို တောရိုင်းဖုံးလို့၊ ရှင်းလိုက်ရတာ၊ ခုကျ ဟောဒီမြောက်ဒဂုံမြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာလေးကို တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အစိမ်းရောင်နယ်မြေလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ကြပြီ။ တစ်လမှာ မီးဖိုချောင်အမှိုက်စို တန်၂၀နီးပါးကို မြေဆွေးလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို MRTV4Good Morning Myanmar ပရိုဂရမ်က ကိုယ်တွေလုပ်တာကို ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့လာနေကြပါပြီ။ Recyglo အဖွဲ့သားတွေလည်းပါပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပဲပေါ့။ အားလုံးအဆင်သင့်ပါပဲ။ #bokashimyanmar #recyglo #proudofyouguys #soilrevolution #comevisitus
အောက်မှာ မြန်မာလိုပါ ပါသေးတယ်နော။ SO good to see Zero Food Waste topping the agenda at this show. Chefs and management from hotels all over Myanmar are here and they are listening: this madness has got to stop. Cut the food waste in the hotel kitchen. And make sure what can’t be used is recycled - into fertile soil and healthy plants. Food for the future. And Inda! Well done! You didagreat job there on the stage! /Bokashi Myanmar team ဒီပွဲမှာ Zero food waste စားသောက်ကြွင်းကျန်မထွက်ရေး ဦးစားပေးထားတာမြင်ရတာ အရမ်းစိတ်ချမ်းသာတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတနံတလျား ဟော်တယ်တွေက စာဖိုမှူးတွေ ဟောဒီပွဲမှာ ရှိနေကြ နားဆင်နေကြတယ်။ ဒီရူးသွပ်ဖ်ွအမှိုက်ကိစ္စရပ်တန့်ပစ်မှဖြစ်မယ်။ ဟော်တယ်မီးဖိုခန်းတွေထဲ အစားအစာချက်ပြုတ်ရာကျန်တာတွေရှင်းကြမယ်။ ကိုယ်ချက်ပြုတ်စားသုံးမရတာကို သေသေချာချာ ပြန်လည်အသုံးပြုကြမယ်။ ဩဇာပြည့်ဝတဲ့မြေဆီအဖြသ်နဲ့ သန်စွမ်းတဲ့အပင်လေးတွေအဖြစ်ပေါ့။ အနာဂတ်အတွက်အစားအစာပဲလေသူတို့ကမှ။ ပြီးတော့ Inda ရေ။ အရမ်းမိုက်တယ်။ စင်ပေါ်မှာ ပြောသွားတာလုံးဝအိုကေပါ။ #bokashimyanmar #zerofoodwaste #hotelfoodexpo #foodwasteisnottrash
အောက်မှာ မြန်မာလိုပါ ပါသေးတယ်နော။ It’s ALL going in! Every bit of food waste at this expo is being recycled. So good to see! /Bokashi Myannar team လုံးဝကိုအလုပ်ဖြစ်လျက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဟောဒီပြပွဲကထွက်သမျှသေးသေးလေးကအစ ပြန်လည်အသုံးချမှာပါ။ မြင်ရတာအရမ်းစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ #bokashimyanmar #zerofoodwaste #foodwasteisnottrash #makesoilnotlandfill
English text follows!!! အဖွဲ့သားတွေကိုအရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဟောဒီမြန်မာစားသောက်ကုန်ပြပွဲကြီးမှာ သူတို့ချက်ရာပြုတ်ရာကကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကို အပြာရောင်ပုံးတွေထဲသာထည့်ဖို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့စားဖိုမှူးအားလုံးကို ဘိုကာရှီအဖွဲ့သားတွေက ထရိန်နင်ပေးပါတယ်။ စားဖိုဆောင်တစ်ခုကို အပြာပုံးတပုံးထားပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာ တကမ္ဘာလုံးမှာတောင်မှ ဒါပထမဆုံးလို့ ပြောသံကြားရပါတယ်။ SO proud of our team! Here they’re training up the chefs at the Myanmar Hotel & Food Expo - ALL food waste is going in the blue barrels. One barrel at every work station. It’saglobal first they say! /Bokashi Myanmar expo team #bokashimyanmar #zerofoodwaste #hotelfoodexpo #bluebarrels
English text follows!!! ဒါ..အိုလီဗာ..ပေါ့။ သူ့ကျေးဇူးနဲ့ ရန်ကုန် ဟော်တယ်စားသောက်ကုန်ပြပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတာပါ။ သူက ငပလီမှာ အစောဆုံး ဟော်တယ်တွေထဲကတစ်လုံးပိုင်ရှင်းလည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာစာဖိုးမှူးများအဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ရင်းက မြန်မာပြည်မှာ အကြွင်းအကျန်မရှိတဲ့ချက်ပြုတ်မှု Zero Waste Cooking ကိစ္စအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ပါ။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကိုယ်တွေနဲ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြပွဲမှာ ကိုယ်တွေရောက်ရှိနေခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့စားဖိုမှူးတွေဟာ ကောင်းမှုများစွာကိုလည်းလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ အပေးအကမ်အကျွေးအမွေးများစွာမှာလည်းသူတို့တွေချက်ပြုတ်ပေးကြပြီး နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့နှင့်လည်း ရင်းနီးစွာလက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တွေရဲ့ သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးအနေနဲ့ ခုလိုပွဲမျိုးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရလို့လည်း တကယ်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ This is Oliver! Thanks to him we’re at the Hotel Food Expo this week in Yangon. He runs one of the original beach lodges on Ngapali and is head of the Myanmar Chefs Association. His mission is to get this zero food waste thing happening in Myanmar and that’s how we met, and why we’re here at the expo. The Myanmar chefs do so much good work, they cook in many charity situations and work closely with Doctors without borders. We’re really proud to be part of all this, in our small way. /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #zerofoodwaste #zerohunger #myanmarchefsassociation #oliveresser
English text follows!!! ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့ဟော်တယ်စားသောက်ကာန်ပြပွဲကနေ အတွေ့အကြုံအများကြီးရရဲ့။ အရမ်းလန်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ပြပွဲကြီးကထွက်သမျှ အမှိုက်စိုတွေကို အကုန်လုံးသိမ်းနေတာပေါ့။ နည်းနည်းရယ်လည်းရယ်ရပြီး ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာလေးတွေရောပေါ့။ ဥပမာ အေးအေးတယောက် သူ့နာမည်နဲ့ကတ်ပြားမရသေးခင် ဒိုင်လူကြီးစားဖိုမှူး Stanny ကတ်ပြားနဲ့ စတန်နီယောင်ဆောင်နေတာမျိုးပေါ့။ တကယ့်စားဖိုမှူးအမှတ်နဲ့ စင်ပေါ်တက်ပြီး အချက်အပြုတ်သင်ခန်းသာမပို့ချခိုင်းခံရတာကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပဲ😂။ A lot of new experiences for us today at the Myanmar Hotel Food Expo in Yangon! We are organising all the food waste at the expo,acool challenge! And all the small stuff that makes life interesting andabit funny, like Aye Aye pretending to be Chef Stanny forawhile before she got her own name tag. Just lucky she didn’t have to get up on stage and doacooking show! /Chef Stanny and the Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #bokashiprincess #myanmarhotelfoodexpo #zerofoodwaste
English text follows!! မြန်မာ့ ဟော်တယ် စားသောက်ကုန်ပြပွဲကနေ ခုတစ်ပတ် မီးဖိုချောင်အမှိုက်တွေသိမ်းပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစားအသောက်တွေက ဒီလောက်ကြီးကိုကြည့်ကောင်းလွန်းနေတော့လဲ အာရုံစိုက်ဖို့ခက်နေပြန်ရော။ We’re collecting the food waste this week at the Myanmar Hotel Food Expo. But it’sabit hard to focus when the food looks THIS good!! /Bokashi Myanmar team #newexperience #boka #zerofoodwaste #sodelicious
Bokashi Myanmar at the big Hotel Food Expo in Yangon. We’ve expanded our team withafew sisters, brothers and nieces so we can man the stand, do our scheduled stage presentations, and collect in all the food waste from the competition kitchens and cafes. Here’s Khaing and her sister, doing the first shift! /Bokashi Myanmar team with supporters #bokashimyanmar #zerofoodwaste #worldenvironmentday #foodwasteisnottrash
English text follows!!! သာကေတမြို့ထဲက Fortune Plazaမှာပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့စားသောက်ကုန်ပြပွကြီး Myanmar Food Expo နဲ့ The 6th Myanmar Culinary Arts Competition ခြောက်ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့စားဖိုမှူး အနုလက်ရာပြပွဲပြိုင်ပွဲ မှာ ဘိုကာရှီ အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ အစားအသောက်ချုပ်ပြုတ်ပျြိင်ပွကြီးက သုံးရက်တာကြာမှာမို့ မီးဖိုချောင်ထွက်အမှိုက်လည်းအများအပြားထွက်မှာပါ။ လိုက်ထရပ်ကားလေးပေါ် ပုံးပြာအလုံး၃၀တင်ဆောင်ပြီး ထွက်သမျှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ ကျမတို့အဖွဲ့ကသိမ်းပေးမှာပါ။ ကျမတို့အတွက်တော့ ဒါဟာ ဂုဏ်ယူရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ မီးဖိုချောင်စွန်ပစ်အမှိုက်မထွက်ရေးကို ကျမတို့ သိပ်ဂရုစိုက်ပါတယ်။အလေးထားပါတယ်။ အခြေအနေအားလုံးကို ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားအုံးမှာပါနော်။ Our team is at the huge Hotel Food Expo this week in downtown Yangon. There are huge cooking competitions and demonstrations going on for the three days of the expo and this generatesaLOT of food waste. We’re trucking in 30 bokashi barrels and our team will be collecting every bit of it. For us it’s an honour. We carealot about zero food waste. We’ll keep you posted how it goes! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #zerofo #foodhotelmyanmar #chefsoftheworld #worldenvironmentday
Please contact us if you'd like to know more about Bokashi Myanmar!